Balcad | News From Somalia
Tag Archives: Balcad
DHAGEYSO:-Balcad oo Balaayo”Mooryaan Beeleed” Loo soo diray!
Maxamuud Xasan Rooble Gudoomiyaha ku xigeenka dhinaca Amniga Balcad ayaa sheegay In Gudaha Degmada iyo wadada isku xirta Balcad iyo Muqdisho xiligaan yaalaan isbaarooyin Maleeshiyo beeleedka Dowladda ay ku qaataan lacago baad ah.
“Gudoomiyaha ugu sareeya maamulku tan iyo markii la magacaabay wuxuu ku sifoobay in lacago baad ah uu ka qaado shacabka ku dhaqan Balcad, Anigana shaqo kuma lihi xad gudubka lagu hayo shacabka”ayuu yiri Gudoomiye ku xigeenka Balcad.
Dowladda ayuu ugu danbeyntii ugu baaqay inay soo faragaliso dhibaatada maamul ee ka jirta Degmada Balcad ee shabeelaha Dhexe.
Halkan Ka Dhageyso Wareysiga Gudoomiye ku xigeenka Balcad
Sheekh Yuusuf Sheekh Ciise kabakutukade ayaa wacad ku maray in wilaayadu u hiilin doonto shacabka ku dhaqan degmada Balcad oo dhibaatooyin kala duwan kala kulmay maamulka iyo Maleeshiyo beeleedka dowladda ee kusugan Balcad.
Halkan Ka Dhageyso Hadalka Waaliga Shabeelaha Dhexe Sheekh Yuusuf Sheekh Ciise Sheekh Axmed
Maleeshiyo beeleed hoostaga Dagaalooge Cabdi Jiinow ninka sheegta inow yahay Gudoomiyaha Shabeelada Dhexe oo xasuuq iyo xarig ku haya dadka ku nool Balcad!!(VIDEO)
Posted on October 11, 2012 by Voice Of Somalia Standard
WARKA SOMALI CHANNEL Cabashada ka imaneysay dadka reer Balcad ee kunool London 10 10 2012
Maleeshiyo beeleed isku beel ah oo hoos taga ama ka amar qaata dagaal ooge Cabdi Jiinow ayaa dhibaato lixaad leh ku haya dad reer Balcad dadkaas oo mud dhowr sano ah nabad ku noolaa laakin hada dhibaato loo gaysanayo ka dib markii ciidanka Amisom iyo Maleeshiyo Beeleed loo gacan galay magaalada balcad.
Cabdi Jiinow ayay qaraabo yihiin Dagaalooge Maxamed dheere ninkii bari dhibaatada ku hayn jiray dadka nool Jowhar,balcad iyo tuulooyinka hoos taga.
Dadka jeed balacd ayaa arintaas dhibsaday kana dhiidhiiyay meel walba oo ay joogaan.
Shacabka ku nool degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe ayaa maanta dhigay dibadbax ballaaran oo ay kaga soo horjeedaan Maleeshiyaadka DKMG-ka
Dibadbaxan oo ay kasoo qeyb galeen boqollal dadweyne ah ayaa waxay Shacabka kaga soo horjeedeen lacago baad ah oo Maleeshiyo Beeleed
ka Dowladda KMG-ku ay kusoo rogeen beeraleyda degmadaasi.Maleeshiyaadka DKMG-ka ayaa rasaas ku riday dadweynaha dibadbaxyada dhigaya, si ay u kala cayriyaan, balse Shacabka ayaa sii waday dibadbaxyadooda, mana la oga wax khasaare ah oo rasaasta lagu furay ka dhashay.
Shacabka ku nool degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe ayaa mudooyinkii dambe waxay ka cabanayeen dhac, dil iyo kufsi baahsan oo ay kala kulmaan Maleeshiyo Beeleedka DKMG-ka oo dhoor bilood ka hor degmadaasi la wareegay.
Culeys ayay la kulmeen raafkii qafaalkii Moqdsho kadib maxaa yeelay dadka degaankaas ayaa hubka u qaatay inay is dulqaadaan gaalo madowda Amisom iyo Maleeshiyo beeleedka Shariif “Murtad”.
Waxaa hubanti ah inay soo muuqatay sharaftii lagu yaqiin dadka degaanadaas oo ah dad caan ku ah gumaysi naceyb,waligoodna aan ogolaan in gaal iyo gaalor
aac ku tamashleeyo guryahooda hortooda.Dadka ku nool degaanadaas ayaa dad AHLU TOWXIID ah waxyna culays badan la kulmeen markii qafaal loo gasytay qarash looga rabo,waxayna hada doorbideen inay iska dul qaadaan kuwa soo duulay,ma ahan markii ugu horeysey oo hubka qataan waligoodna waalagu yaqiiin.taariikhdayaa xusi doonta.Inshalaah.
Mid kamid ah Wargeysyada ugu afka dheer Waddanka Britain oo soo daabacay Ciidamo Ingiriis ah oo ka qeybqaadanaya Dagaalka Soomaaliya, Iyo weliba Carruur Soomaaliyeed oo ay askareeyeen.
Posted on July 26, 2012 by Voice Of Somalia Standard
Jariidadda The Times oo kamid ah Wargeysyada ugu afka dheer ee kasoo baxa Waddanka Britain ayaa si rasmi ah ubaahisay Muuqaallada Ciidamo Kasocda Dowladda Ingariiska Kuwaasi oo laciyaaraya Carruur Soomaaliyeed, iyagoo Ciidamadaasi Booqasho kutagay Xerooyin ay kusuganyihiin Dad Barakacayaal ah oo kuyaalla inta Udhaxaysa Carbiska iyo Siinka Dheer ee Duleedka Muqdisho.
Wasiirka Gaashnidhigga Dowladda KMGka ah oo lahadlay Jariidada The Times ayaa u xaqiijiyay in Ciidamo Kasocda Dowladda Ingariiska ay ku suganyihiin Gudaha Soomaaliya isagoo kugaabsaday inay yihiin Ciidamo Tabarayaal ah.
Waxa laga dheehan karaa Muuqaallada ay baahisay Jariidadda The Times Carruur Soomaaliyeed oo ay Askareeyeen Ciidamada Shisheeye ee AMISOM iyo kuwa Ingiriiska ka socda oo haatan aad mooddo in ay kasoo baxeen isqarintoodii hore.
Shirkii Dhawaan kadhacay Waddanka Talyaaniga ayaa Reer Galbeedku waxa ay Dowladda KMGka ah iyo AMISOM ku canaanteen inay Askarayso Caruurta, Arrinkaasoo haatan Caddeymaheedu ay ka muuqdaan Wargeysyada Adduunka.
Posted on July 23, 2012 by Voice Of Somalia Standard
Wilaayada Islaamiga ah ee Shabeellada Hoose ayaa dayactir ku samaysay Biya-xireenka “Mashallaay” ee ku yaalla duleedka Degmada Jannaale kadib markii ay daxalaysteen qaar ka mid ah biraha muhiimka ah ee uu Biya-xireenku leeyahay taas oo keentay inuu biyaha wabiga sidii loogu tala galay ugu kaydin waayo beeralayda halkaas ku dhaqan.
Dayactirka lagu sameeyay Biya-xireenka weeyn ee “Mashallaay” ayaa waxaa iska kaashaday Maamulka Wilaayada Islaamiga ah ee Sh.Hoose iyo dadka beeralayda ah ee ku dhaqan wilaayada iyadoo Dayactirku uu socday muddo hal bil ah ayna ku baxday dhaqaale aad u fara badan.
Waaliga Wilaayada Islaamiga ah ee Sh.Hoose Sh.Maxammed Abu Cabdalla oo gaba-gabadii Dayactirka ka hadlay ayaa sheegay in Biya-Xireenka Mashallaay uu ahmiyad gaar ah u leeyahay dadka Muslimiinta ah ee ku dhaqan Sh.Hoose iyada oo ay ka faa’iideystaan beeralayda ku dhaqan affar Degmo oo kala ah Jannaale, Qoryooleey, Kuntuwaareey iyo Buula-Mareer.
Sh.Abu Cabdalla ay sheegay in uu dhamaaday waqtigii ay dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool dhulka ay Mujaahidiintu ka taliyaan wax ka sugi jireen Hay’ado shisheeye oo gaala ah ama NGO-yo qandaraas been ah soo qaata, taas badalkeedana dadka Muslimiinta ah iyo Mujaahidiintu ay danahooda iyagu qabsanayaan, isagoona intaas ku daray in Duullaanada uu Cadawgu soo qaadayo iyo Dagaalka ay Mujaahidiintu ku jiraan uusan ka mashquulin doonin inay dadka Bulshada ah u adeegaan wixii maslaxadooda ahna u istaagaan.
Ma aha markii ugu horeysey ee ay Mujaahidiintu Dayactiro iyo dhisme intaba ku sameeyaan goobihii danta guud ee ku bur-buray Dagaalladii sokeeye ee wadanka soo maray, iyadoo arintaasi ay qayb ka tahay waxa Qabaa’ilka Soomaaliyeed ee ku hoos nool Maamullada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ay taageerada hagar la’aanta ah ula garab taaganyihiin Mujaahidiinta ayana naf iyo maalba ugu bixinayaan sidii ay uga sii talin lahaayeen dhulka ay deganyihiin.
Ma rabtaa inaad aragto xaqiiqada ka jirta Xamar ilaa Afgooye . “Xukun Baadil lagu raadshay dhibka looga biximaayo”
Posted on July 17, 2012 by Voice Of Somalia Standard
Maleeshiyaadka DKMG ah iyo ciidamada AMISOM ee ku duulay degmadaasi ayaa dilal iyo dhac xoogan ka wada degmada taasi oo ka dhigan in shacabka Masaakiinta ah ladoonayo in laga sifeeyo magaalada.
Goob Joogayaal ku sugan degmada ayaa sheegay in 5-tii saacba sedax mar ay gudaha degmada ka dhacaan dhaca iyo kufsi arrinkaasi oo qoysas badan ku riixay in ay isagasoo cararaan degmada.Afgooye waxaa ka cararay ganacsatada waaweyn ee caanka ah sababa laxariira dhanka amaanka, haddii aad dooneysid in aad suuqyada degmada Afgooye wax ka iibsato mahelaysid goob ganacsi oo adeeg dhamaystiran leh waxaana degmada hantidooda kala baxay ganacsato caan ah.
Dadka degmada ku dhaqan ayaa soo xusuunaya maamulkii Indho Cadde oo shacabka degmadaasi hantidooda dhici jiray Afhayeenka AMISOM ee Jabuutiyaanka ah ayaa maleeshiyaadka Afgooye ku tilmaamay qowlaysato aan wax sumcad ah laheyn.
Habeen hore ayaa gudaha Afgooye lagu dilay 2 qof oo isku qoys ah magaalada sidaan u gubanaysa muddo kabadan Afar sanadood waxay aheyd mid amaan ah oo dadku ahaayeen kuwa sharfan waxaa u nabad gelayay maalkooda iyo sharafkooda laakin kuwa Khuwanada ay ee gaalada Afrikaanta soo anshax-xumeeyeen waxay magaalada ka gaysanayaan wax walba oo xumaan ah.
Ma rabtaa inaad aragto xaqiiqada ka jirta Xamar ilaa Afgooye .
“Xukun Baadil lagu raadshay dhibka looga biximaayo”
Waxaa sii kordhaya dhibka mooryaan beeleed iyo gaalomadow ku hayaan dadka ku nool Xamar ilaa Afgooye.Shacabka degmada Afgooye ayaa walaac ballaaran ka muujinaya xaaladda amaanka degmadaasi oo ay gacanta ku hayaan ciidamada kufaarta Afrikaanta ee duulaanka kusoo qaaday maamulada islaamiga ah.
Wararka ka imaanaya Afgooye ayaa sheegaya in dhaca iyo dilalka ay joogta ka naqdeen magaalada waxaana soo shaac baxay xeelada cusub oo tuugeysi ah oo ay ku dhaqaaqayaan ciidanka cadawga.
Mid kamida dadka deegaanka ayaa sheegay in goobaha ganacsiga magaalada Afgooye intooda badan laboobay halka beeralayda ay la’yihiin goob ay ku aaminaan dhaqaalaha ugasoo go’a beerahooda.
Xalay laba qof oo shacab ah ayaa gudaha degmada lagu toogtay kadib markii ay isku dayeen in ay ashtako ka gudbiyaan saraakiil maleeshiyaad mooryaan ah, dadka aan hubeysneyn ayaa lakulmaya handadaad iyo jirdillo xoogan waxaana magaalada kajira wax u eg nidaamkii Xuseen Wehliye Cirfo oo kamid ahaay maamulkii Indha Cadde.